Imandarmedia.com.np: एआईजी बढुवा प्रकरणमा यस्तो के गर्दैछन् गृहमन्त्री शर्मा ? विवादको घेरामा आईजीपी अर्याल (कमजोरीसहित)
Main News, Newspaper » एआईजी बढुवा प्रकरणमा यस्तो के गर्दैछन् गृहमन्त्री शर्मा ? विवादको घेरामा आईजीपी अर्याल (कमजोरीसहित)
एआईजी बढुवा प्रकरणमा यस्तो के गर्दैछन् गृहमन्त्री शर्मा ? विवादको घेरामा आईजीपी अर्याल (कमजोरीसहित)
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसमा परेपछि दंग नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मिङ्मार लामा केही दिनमै निराश बन्न पुगे । बढुवा सिफारिसमा परेको केही दिनमै उनलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी मुख्यालय काजमा ताने । गृह मन्त्रालयले लामालाई काजमा तान्न अनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाललाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पठाउन मुख्यालयमा पत्र पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र विमलेन्द्र निधिसँग बढुवा सिफारिस गर्दा खटपट परे पनि प्रहरी अधिकृतको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । एसएसपी रमेश खरेललाई नसिहत दिन गौतमले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उनी 'राम्रा प्रहरी अधिकृतको वृत्तिविकासमा असर पर्ने खालको निर्णय नगरौं' भन्दै खरेलको पक्षमा उभिएका थिए । निधिले काठमाडौं परिसरमा छविलाल जोशीलाई ल्याउन दबाब दिएका थिए । उपेन्द्रकान्तले अस्वीकार गरेपछि जोशीलाई एकलौटी ढंगले काठमाडौं परिसरमा ल्याउन निधि सफल भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।